विश्वका यी ६ अचम्मका ठाँउहरु जहाँ सुर्य कहिल्यै अस्ताउँदैन ! – rastriyakhabar.com
विश्वका यी ६ अचम्मका ठाँउहरु जहाँ सुर्य कहिल्यै अस्ताउँदैन !
सुर्य कहिल्यै नअस्ताउने यस्ता ठाँउलाई ‘द मिडनाइट सन’पनि भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक कारणले हुन्छ । उत्तरमा आर्कटिक र दक्षिणमा अन्र्टाटिक वृत्तमा गर्मि महिनामा चौबिसै घण्टा सुर्य देख्न सकिन्छ ।
सुर्य नअस्ताउने केही स्थानहरुको सुची निम्न छन् ।
उच्च भौगोलिक उचाइको कारण नर्वेमा ग्रिष्म ऋतुमा मध्यरात सम्म पनि सुर्य अस्ताउँदैन । यो देशमा मे महिनाको अन्तिमबाट जुलाईको अन्तिम सम्म करिब ७६ दिन सुर्य २० घन्टा भन्दा बढी उदाउँछ ।
यो देशको अधिकांश भागहरुमा गर्मी महिनामा सुर्य लगातार ७३ घण्टासम्म उदाँउछ । यहाँ सुर्य अस्ताएर पनि केही समयमै फेरी उदाँउछ जसले रात र उदाँउदो दिनको भिन्नता नै हराइदिन्छ ।
स्विडेनमा मे महिनाको सुरुबाट अगस्टको अन्तिमसम्म सुर्य मध्यरातमा अस्ताउँछ र विहान ४ बजे नै उदाँउछ । यो देशमा वर्षमा करिब ६ महिनासम्म लगातार धेरै घाम लागिरहने गर्छ ।
४. अलास्का, अमेरिका
अलास्कामा मे महिनाको अन्तिमदेखी जुलाइको अन्तिमसम्म सुर्य अस्ताउदैन् । अलास्काको फेयरब्याङ्क्स आर्कटिक वृत्तको दक्षिणमा पर्छ जहाँ सुर्य राति साढे बाह्र बजे अस्ताँउछ । फेयरब्याङ्क्स आफ्नो टाइमजोन भन्दा ५१ मिनेटले अगाडि रहेका कारण यस्तो हुने गर्छ ।
युरोेपको दोस्रो ठूलो टापु आइसल्यान्डमा सूर्य मे को सुरुवातदेखी जुलाइसम्म अध्याँरो हुँदैन् किनभने सुर्यजतिखेर पनि आकाशमै हुन्छ । आर्कटिक ग्रिष्मको ऋतुको समयमा सुर्य मध्यरातमा अस्ताउछ र बिहानतिन बजे उदाँउछ ।
विश्वको दोस्रो ठूलो देशले ग्रिष्म ऋतुको ५० दिन जति समय लगातार सुर्यको प्रकाश देख्छ । यस देशको इनुभिक र उत्तरी पश्चिम क्षेत्रहरुमा । यो देश वर्षैभरि हिँउले ढाकिएको हुन्छ ।
बुधबार, असार २७, २०७५ मा प्रकाशित